COVID ကာလမှာလုပ်စရာမရှိရင် ကြည့်ကိုကြည့်သင့်တဲ့ Series (7) ခု | Yangon Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Yangon - Yangon Directory | Yangon Yellow Pages
Stay Home ကာလ အိမ်မှာနေရင်းနဲ့ ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရမှန်းမသိ ဖြစ်နေပြီလား??
လုပ်စရာရှိသွားအောင် အခုပြောပြပေးမယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲ (၇) ခုကို ကြည့်လိုက်ပါ ...
ကျွန်တော်ကတော့ Game Of Thrones လောက်ဇာတ်အိမ်၊ ဇာတ်လမ်းကြီးပြီး ပျင်းစရာလုံးဝမကောင်းပဲ ဇာတ်လမ်းထဲကို စွဲခေါ်သွားနိုင်တဲ့ Serie မကြည့်ဘူးသေးပါဘူး။ ၂၀၁၁ ကနေ ၂၀၁၉ ထိ (၉) နှစ်တာ ဇာတ်လမ်းတွဲကြီးမှာ ဇာတ်သိမ်းပိုင်း သိပ်အားမရတာကလွဲလို့ ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေက အနှစ်တွေကြီးပါပဲ။ သတ်တာ ၊ ဖြတ်တာတွေ နဂါးတွေ လူသေတွေပါပါတဲ့ Battle တွေကို မျက်စိအဟောင်းသားကြည့်ရှုခံစားရမှာပါ။
ဒီ Serie ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုရင် UK မှာဆယ်စုနှစ်အတွင်း အကောင်းဆုံးလို့ သတ်မှတ်ခံထားရတာကိုပဲ ကြည့်လိုက်ပါ။ ၁၈၉၀ နဲ့ ၁၉၃၀ ကြားက ဘာမင်ဂမ်မှာရှိတဲ့ ဗြိတိသျှ ဂန်းစတားတွေရဲ့ အဖြစ်မှန်ကို ရိုက်ထားတာမို့လို့ မကြည့်ရသေးရင် အခုချက်ချင်း သွားကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲပါပဲ။
တစ်ကားထည်းနဲ့ အကြာကြီးကြည့်ချင်တာဆိုရင်တော့ စိတ်မပူပါနဲ့။ဒီဇာတ်လမ်းတွဲက Season 31, Episodes 700 ကျော်လောက်ရှိပါတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းကကြည့်တော့ ညဏ်မမှီတော့ ဘာကာတွန်းကားကြီးလဲလို့ ထင်ခဲ့ပေမယ့် အခုပြန်ကြည့်တဲ့အခါတော့ လုံးဝအနှစ်ပါပဲ။ ရီစရာကောင်းတဲ့ အခန်းတွေအများကြီးပါသလို တွေးစရာတွေလည်းအများကြီးပါတာမို့လို့ နှစ်သက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
Chernobyl ဆိုတာ HBO ကလွင့်တဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းတွေထဲက တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ (၁၉၈၆) ခုနှစ် ယူကရိန်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ နူကလီးယား မတော်တဆမှုအပေါ် အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး အပိုင်းကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ နောက်အပိုင်းတွေကို မကြည့်ပဲမနေနိုင်အောင် ဆွဲခေါ်သွားနိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေး လည်းဖြစ်ပါတယ်။
သင်က Lord Of The Rings ရဲ့ fan လား?? ဒါဆိုရင်တော့ The Witcher ကသင့်ကို စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝရစေမှာပါ။ တစ်ခုမကောင်းတာက Season 1 ပဲထွက်သေးတာဖြစ်ပြီး Season2က 2021 လောက်မှထွက်မှာပါ။ဇာတ်ကားကြည့်ရတာ ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ The Witcher Game လေးပါ ဆက်ဆော့ကြပေါ့ :3
Superheroes ရုပ်ရှင်တွေဆိုရင် မကြိုက်သူမရှိသလောက် ရှားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာကတော့ စူပါပါဝါတွေရပြီး မကောင်းမှုတွေလုပ်နေတဲ့ စူပါဟီးရိုး (၇) ယောက်ကို The Boys ဆိုတဲ့ ဘာစွမ်းအားမှမရှိတဲ့ အဖွဲ့လေးက ဘယ်လိုပညာပေးမလဲဆိုတာကို ရင်သပ်ရှုမောစွာနဲ့ ကြည့်ရမှာပါ။
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကလည်း နာမည်ကြီးပါပဲ။ ကလေးတစ်အုပ် ဘယ်လိုသောက်ကမြင်းကျောထပြီး ဒုက္ခတွေရောက်ကြမလဲ ၊စိတ်ခြောက်ခြားစရာကောင်းတဲ့ တခြားကမ္ဘာက သတ္တဝါကြီးတွေ နဲ့တွေပြီးဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲ …
သိချင်ရင်တော့ ကိုယ်တိုင်သာ ကြည့်လိုက်ပါတော့ ။